Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguSteven
Indlu yestudio yangoku kunye nekhululekileyo, yabucala ene-200Mbps ye-intanethi ilungele ukusebenza ngocingo, kunye nesitshixo sedijithali. Kufuphi nePlaza Cayma, iindawo zokuthenga eziphambili kunye nezokhenketho. Isiqingatha sebhloko ukusuka kwindlela enkulu enezithuthi zikawonke-wonke okanye iiteksi. Indawo yokupaka yangaphakathi ibandakanyiwe. Indawo ekhuselekileyo kakhulu.
Iifestile ezinkulu ezinombono omangalisayo wokutshona kwelanga e-Arequipa, kunye neerola ezimnyama ukuba ufuna ubumfihlo obungakumbi. Iinkonzo ezisisiseko WiFi 200Mbps, SmartTV.
Indawo ye "Sunset Studio Apartment" isembindini kwaye ikhuselekile. Yiza wonwabele eyona mbono ilungileyo yeArequipa ukutshona kwelanga, ukusuka eluphahleni lwesakhiwo ungabona yonke iArequipa.
Ijonge ukubonelela ngeyona ntuthuzelo inkulu kundwendwe ngokuphumeza umatrasi weDrimer okumgangatho ophezulu. Konke kwisakhiwo esitsha esinezinyusi ze-OTIS zanamhlanje kunye nevidiyo yeeyure ezingama-24 zokucupha.
Ikufuphi nePlaza Cayma, apho unokonwabela izitya zesintu ezifana neArequipeño Adobo, iziqholo zaseMelika, iihagu zehagu, njl. Ikwakufutshane neAvenue yoMkhosi eneziko lezemali, iindawo zokuthenga, iindawo zokutyela kunye neekhemesti.
I-Urb. I-Los Manzanos yenye yezona ndawo zithuleyo kwaye zamkelekile kakhulu kwi-Arequipa. Ngomgangatho wokuphakama ovumela ukuba ezo mbono zimangalisayo zazo zonke i-Arequipa. Inokubeka iliso kwiiyure ezingama-24, kwaye ikuvumela ukuba uchithe iintsuku ezimbalwa zokuphumla, ilungele ukukhulula uxinzelelo kunye nokuhlaziya amandla.
Ndihlala kwisakhiwo esinye, ixesha elininzi ndifumaneka kuyo nayiphi na imibuzo okanye iimfuno.